शेयरमा पूँजीगत लाभकरको विवाद | गृहपृष्ठ
Home पाठक विचार शेयरमा पूँजीगत लाभकरको विवाद
on: May 22, 2018 पाठक विचार
शेयरमा पूँजीगत लाभकरको विवाद
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५क को उपदफा (२)मा कुनै बासिन्दा निकायमा रहेको हितको निःसर्गबाट लाभ हुन गएमा दफा ३७ बमोजिम गणना गरिएको त्यस्तो लाभमा देहायबमोजिम अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
आर्थिक अभियान दैनिकको जेठ ०७, २०७५ को अङ्कमा छापिएको ज्योति दाहालको ‘लाभकर कि कारोबार कर’ माथिको विचार मन्थन अत्यन्तै शिक्षाप्रद छ । यसै सम्बन्धमा मैले पनि मिति चैत १६, २०७४ राजस्व परामर्श समितिमा सुझाव पेश गरेको थिएँ । सो निम्नअनुरूप छ :
१. आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५क को उपदफा (२)मा कुनै बासिन्दा निकायमा रहेको हितको निःसर्गबाट लाभ हुन गएमा दफा ३७ बमोजिम गणना गरिएको त्यस्तो लाभमा देहायबमोजिम अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
दफा ३७ अनुसार निःसर्गबाट प्राप्त हुने खुद रकमबाट सो हित खरीद गर्दा लागेको खुद खर्च घटाई बाँकी रहेको रकमलाई लाभ मानिने व्यवस्था छ । यो दफाअनुसारको अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने र साथै दफा ३७ अनुसारको कर निर्धारण गर्नुपर्ने दायित्व धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकाय अथवा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई बोकाएको छ । र, सो एक्सचेञ्जले हाल शेयर ब्रोकरहरूमार्पmत अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने कार्य गरिरहेको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जसँग अथवा शेयर ब्रोकरहरूसँग प्रत्येक लगानीकर्ताले कुन शेयर कुन मोलमा किनेको थियो सो रेकर्ड हुँदैन । अर्थात्, शेयर ब्रोकरहरूले आफ्नै कम्पनीमार्फत खरीद गरेको शेयरको मोल पत्तो लगाउन सक्छ । तर, अरू ब्रोकरहरूमार्पmत किनेको शेयरको मोलका लागि ती लगानीकर्ताको भनाइमाथि नै निर्भर रहनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा बढी मोलमा किनेको शेयरको मोललाई नै पटकपटक सोही मोलमा किनेको भनी कर छल्ने प्रयास भइरहेको पाइएको छ ।
एउटै कम्पनीको शेयरहरू पटकपटक विभिन्न मोलमा किनेको पनि हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा खुद खर्चको निर्धारण औसत, पहिले किनेको पहिले बेच्ने आधार अथवा पछि किनेको पहिले बेच्ने आधारमध्ये कुन आधारमा गर्ने सो पनि अन्योल हुन जान्छ । र, यसको निर्धारण शेयर ब्रोकरहरूले गर्नै सक्दैनन् ।
उपर्युक्त आधारमा मेरो सुझाव छ कि सो व्यवस्था अन्त्य गरी विक्री रकममाथि नै एउटा निर्धारित दरले अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । सानो रकमको विक्रीमा छूट गर्दा पनि हुन्छ । निर्धारित दर विक्री रकमको शून्य दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी नभए न्यायोचित नै हुने थियो
यस व्यवस्थाबाट सरकारलाई फाइदा
हाल खुद खरीद मोलमा भइरहेको चलखेलबाट छुटकारा पाइनेछ ।
कुनै एउटा व्यक्तिले एउटा आर्थिक वर्षमा कति रकमको विक्री गरेको छ सो तथ्याङ्क सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
एउटा निर्धारित रकमभन्दा बढी सालाना शेयरको कारोबार गर्ने करदाताले अनिवार्य रूपले आनो आय विवरण पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न सजिलो हुन्छ । र, यसो गर्दा करको दायरा बढ्न जाने अवस्था आउँछ ।
यस्ता करदाताको लाभको रकम दफा १०१ अन्तर्गत निर्धारण गर्ने सजिलो हुन जान्छ ।
कुनै कर दाताले आयकर ऐनको दफा ४७ क. को उपदफा (४) बमोजिमको कर छूट गलत तरीकाले लिएको छ भने दफा १०१ अनुसारको कर निर्धारणबाट स्वतः थाहा हुन सक्छ ।
कुनै शेयर बेच्दा हुने नोक्सानलाई अन्य शेयर बेच्दा हुने लाभबाट समायोजन गरी बाँकी रकममा मात्र कर निर्धारण गर्न मिल्ने ।
स्वयम् कर निर्धारण गरी १ नम्बरको पूँजीको स्रोतको निर्माण गर्ने ।
२. ज्योति दाहालले लेख्नुभएको छ, ‘अग्रिम कर व्यक्तिका लागि अन्तिम कि अग्रिम भन्ने विवाद कायम रहेको छ ।’ आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९२ मा दफा ९५क. बमोजिमको अग्रिम करलाई समावेश गरेको छैन । साथै, दफा ९५क को उपदफा (१३) मा ‘यस दफाबमोजिम दाखिला गरिएको अग्रिम कर दाखिला गर्नुपर्ने व्यक्तिले तिर्नुपर्ने वार्षिक कर दायित्वमा घटाउन पाउनेछ’ भनी लेखिएको छ । यी दुवै प्रावधानले दफा ९५क अनुसारको अग्रिम कर अन्तिम नहुने कुरा स्पष्ट पारेको छ ।
यस दफाअनुसारको लाभ करको गणना गर्ने प्रथम कर्तव्य करदातामाथि नै रहेको भन्ने कुरा यस ऐनको दफा ९६ मा उल्लेख भएको छ र सोमा केही त्रुटि पाइएमा दफा १०१ अन्तर्गत आन्तरिक राजस्व कार्यालयले संशोधित कर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । तसर्थ, शेयर ब्रोकरले अथवा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले करको गणना गर्ने कार्य आयकर ऐनअनुसार नभएको जानकारी पेश छ ।
दाहालले लेख्नुभएको छ, ‘साथै यसलाई व्यक्तिको हकमा अन्तिम कर मान्नुपर्ने समेत आवश्यकता रहेको छ ।’ अन्तिम कर मान्नुपर्ने व्यवस्थाले कर छलीमा अझ सहयोग पुग्ने हो कि भन्ने मेरो शङ्का रहेको छ ।